मध्यरातमा मान्छे मा’रेर प्रहरीकाेमा पुगे राजु परियार, टाउकाे झोलामा देखेपछि तर्सिए प्रहरी! – PathivaraOnline
Home > समाचार > मध्यरातमा मान्छे मा’रेर प्रहरीकाेमा पुगे राजु परियार, टाउकाे झोलामा देखेपछि तर्सिए प्रहरी!
admin September 4, 2020 September 4, 2020 समाचार, समाज	0
काठमाडौ । धादिङमा एउटा सामान्य विषयमा विवाद हुँदा युवकले वृद्धको ज्यान लिएर उनको टा’उको झो’लामा बो’केर प्रहरीकहाँ आत्मसमर्पण गर्न पुगेका छन् । बिहीबार राति १० बजेतिर भएको सामान्य विवाद पछि युवकले वृद्धको ज्यान लिएका हुन् । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–१३ स्थित खलचेतमा भएको यो घटनाको प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ज्यान लिएपछि युवक नै प्रहरीकाेमा पुगेका थिए ।
सामान्य विवाद पछि युवकले वृद्धको ज्यान लिएका हुन् । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–१३ स्थित खलचेतमा भएको यो घटनाको प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । ज्यान लिएपछि युवक नै प्रहरीकाेमा पुगेका थिए । रातिमा वाटोमा हिडिरहेका परिचित ब्यक्तिलाई देखेपछि राजुले कहाँवाट आउनुभएको हो बाबै ? भनेकै कारण यस्तो घटना भएकाे जनाइएकाे छ ।
खुशीकाे खबरः ‘कोरोना संक्रमित निको भए, अब डिस्चार्ज हुदै…